88 Generation Students (Exile): ရေသဘင်ပွဲတော်မှာ ဗုံးသုံးလုံးကို ပြည်သူများ အကြားတွင် WE FIND OUT WHO EXPLOTED THREE BOMBS AMONG THE PEOPLE IN THE WATER FESTIVAL
BURMA BUILDS NUCLEAR IN SECRET SITE TO STAND OFF INTERNATIONAL RIVAL
ရေသဘင်ပွဲတော်မှာ ဗုံးသုံးလုံးကို ပြည်သူများ အကြားတွင် WE FIND OUT WHO EXPLOTED THREE BOMBS AMONG THE PEOPLE IN THE WATER FESTIVAL
ရေသဘင်ပွဲတော်မှာ ဗုံးသုံးလုံးကို ပြည်သူများ အကြားတွင်
ပက်ပက်စက်စက် ဖေါက်ခွဲခဲ့သူကို တွေ့ရှိ
A senior official said the explosions occurred while officials from the Rangoon Great Thingyan Disciplinary Committee were conductingacheck of pavilions amid reports that the junta leader's grandson would visit, but “Nay Shwe Thway Aung attended the festival at his own pavilion in front of the RDC compound on Kabar Aye Pagoda Road.
All of the sources who described the scene prior to the blasts asked for anonymity because they were not authorized to speak about the incident and complicity among military high rank official for the power balance rival.
It is not clear that the explosions appeared to have targeted Nay Shwe Thway Aung and his entourage or general Thiha Thura Tin Aung Ming Oo’s son who was on the stage before bombs blast.
But “ 20 minutes before exploded, Nay Pyi Daw called Nay Shwe Thawy Aung where he was”, said unnamed officer from Myanmar Telecommunication Department.
Meanwhile, 20 people remain in intensive care at Rangoon General Hospital, and 86 men and 29 women are listed in serious condition. Eight people died in the blasts, according toastate-run newspaper.
State newspaper Wednesday charged some anti-government organizations at home and abroad with mastermindingarecent terrorist bomb attacks in the water festival in Yangon, in which eight people were killed and 170 others were injured.
Without furnishing firm evidences so far, the "Mirror" accused such organizations as Kayin National Union (KNU), All Burma Students Democratic Front (ABSDF), Kayin Youth Organization (KYO), Democratic Alliance of Burma (DAB), National League for Democracy- Liberated Area (NLD-LA), National Council of the Union of Burma ( NCUB) of being responsible for the bomb attacks, citing some information that these organizations held meetings inaneighboring country earlier to plot bombings during the water festival which targeted at Bago, Mandalay, Yangon and Nay Pyi Taw areas.
Under the name of "A researcher", the commentary of the paper also charged the NLD, one of the 10 old political parties in Myanmar which has boycotted the coming general election, with being involved in the incident along with its allies.
The paper quoted statistics as saying that there occurred 36 cases of such bomb attacks during 2009 and over 300 since 1988 when the present government took power.
The paper further disclosed inacompiled report that during the period of Myanmar's water festival over the past week, bombs blast in four places in the country with the first on April 14 atatoll gate in Muse check point in Shan state run byaprivate Asia World Company, the second on the same day at the compound ofacheck point in southeastern Kayin state's Kawkareik, injuring three persons, the third on April 15 atawater throwing pandal in Yangon killing eight people and injuring 170, and the fourth on April 17 at four worksites of the Myitsone hydropower dam project in the upper reaches of the Ayeyawaddy River in northernmost Kachin state on April 17, injuring one person and destroying two temporary buildings and six motor vehicles.
Surprisingly, the Myanmar controlled newspapers did not express the conflict in Nay Pyi Daw since 2010 Electoral Law announced. In Naw Pyi Daw, junta chief Sr-Gen Than Shwe told Gen Thiha Thura Tin Aung Myint Oo to be ready to transfer for political party in 2010 election. But Gen Thiha Thura Tin Aung Myint Oo never showed his wish to bow his head for the junta chief’ s command. But junta prime minister Gen Thein Sein did.
(၂၀၁၀) သင်္ကြန်အကြတ်နေ့ ကန်တော်ကြီးပတ်လမ်းပေါ်ရှိ X20 မဏ္ဏပ် အနီးတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက် ရန်ကုန်မြို့တွင်း ရှာဖွေရေးစီမံချက်ကို အပူတပြင်း လုပ်ဆောင်လျှက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။
အဆိုပါ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့် အမျိုးသား (၅) ဦးနှင့် အမျိုးသမီး (၃) ဦး သေဆုံးပြီး လူပေါင်း (၁၇၀) ကျော် ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာ ရရှိခဲ့သည်ဟု နအဖ၏ သတင်းထုတ်ပြန်ရေးဌာနဖြစ်သော မြန်မာ့အသံ (အသံလွှင့်ဌာန)၊ ကြေးမုံသတင်းစာနှင့် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတို့မှ သတင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ပြည်ပရောက် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြည်တွင်းသောင်းကျန်းသူများ၏ လက်ချက်ဟုလည်း နအဖက တိုက်ရိုက်စွပ်စွဲပြောဆိုခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့် အမှန်တကယ် သေဆုံးသူဦးရေမှာ (၄၅) ဦး ရှိပြီး၊ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး (ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောဌာန) တွင် အတွင်းလူနာအဖြစ် (၈) ဦး တက်ရောက်ဆေးကုသမှု ခံယူနေလျှက်ရှိပါသည်။ ဒဏ်ရာရသူဦးရေမှာ (၂၀၀) ကျော်ရှိကြောင်း ရန်ကုန် ဆေးရုံကြီး (၅/၆) တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ဆရာဝန်လောင်းတစ်ဦးမှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ နအဖ၏ အမှတ် (၄) စစ်ဒေသမှုး ဗိုလ်မှုးကြီးအုံးချိုအား စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ ဆေးရုံသို့သွားရောက်ဆေးကုသခွင့်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ကြားသိရပါသည်။
ဗုံးပေါက်ကွဲမှု၏ အဓိက သံသယ တရားခံမှာ နအဖစစ်အစိုးရ၏ ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးသန်းရွှေ၏ မြေးဖိုးလပြည့်(ခ) နေရွှေသွေးအောင် ဖြစ်သည်ဟု ယူဆနေကြပြီး၊ ၄င်းတို့ နအဖအတွင်းရှိ သူ မကျေနပ်သော ဗိုလ်ချုပ်များ၏ သားများကို လုပ်ကြံခြင်းဖြစ်ကြောင်း ခိုင်လုံတိကျသေချာသော သတင်းရပ်ကွက်မှ သတင်းရရှိပါသည်။
နအဖ စစ် အစိုးရမှ ယင်းဗုံးပေါက်ကွဲမှု သတင်းကို ပြည်တွင်း မီဒီယာဂျာနယ်များတွင် အကျယ်တ၀င့်ဖော်ပြရန် ညွှန်ကြားနေကြောင်း၊ ဂျာနယ်မျက်နှာဖုံးများ၌ပင် ကြီးမားစွာ ဖော်ပြခိုင်းနေကြောင်း၊ ဤပေါက်ကွဲမှုသည် မိမိတို့နှင့် မသက်ဆိုင်၊ မိမိတို့တွင် တာဝန်မရှိ ၊ မိမိတို့၏ လုပ်ကြံခြင်း မဟုတ်ကြောင်း သိသာစေရန် နအဖစစ်အစိုးရ၏ ကာကွယ်မှုတစ်ရပ်ပင်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်သူများအကြား ပြောဆိုဝေဖန်လျှက်ရှိပါသည်။
ရန်ကုန်မြို့နေရာအနှံ့အပြားတွင်လည်း ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းများကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်ဆောင်နေပြီး၊ ဗုံးဖေါက်ခွဲသူအားဖမ်းဆီးမိပါက ဆုငွေ (၁၀) သိန်းဆုချမည်ဆိုသည့် ကြော်ငြာစာများကိုလည်း လမ်းဆုံလမ်းခွများတွင် ရယကများ ၊ စွမ်းအားရှင်များကလိုက်ကပ်နေကြောင်း မျက်မြင်သက်သေများက ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၏ အထွဋ်အမြတ်ဖြစ်သော လေးဆူဓါတ်ပုံ ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီးပေါ်သို့ လာရောက်ကြသူ ဘုရားဖူးပြည်သူများကိုလည်း မုခ်ဦးအပေါက်ဝများမှနေ၍ နအဖ လက်အောက်ခံ လုံခြုံရေးများ၊ အရပ်ဝတ် စရဖ ထောက်လှမ်းရေးများမှ အိတ်သွန်ဖာမှောက် သဲသဲမဲမဲ ရှာဖွေစစ် ဆေးလျှက် ရှိပါသည်။ နအဖ၏လုပ်ရပ်များသည် ကလေးနှင့် ခွေးများကပင် ယုံကြည်မှုမရှိ၊ ရွံ့မုန်းလျှက်ရှိကြောင်း လူတိုင်းလူတိုင်း၏ ပါးစပ်ဖျားတွင် ရေပန်းစား ပြစ်တင်ဝေဖန်သံများစွာ ဆူညံ၍ ထွက်ပေါ်နေပါတော့သည်။
ဗုံးပေါက်ကွဲမှုတွင် သေဆုံးသောသူများကို နအဖ မှ ထုတ်ပြန်
၁၅.၄.၂၀၁၀ သင်္ကြန်အကြတ်နေ့ ကန်တော်ကြီးပါတ်လမ်း၊x2o (special one) မဏ္ဍပ်တွင် လက်ပစ်ဗုံးဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုဖြစ်စဉ်ကြောင့် သေဆုံးခဲ့ကြသူများ နှင့်ပြင်းထန်စွာထိခိုက်ဒါဏ်ရာရသူများ ။
၁။ ဗိုလ်မှုးကြီးအုန်းချို အမှတ်(၄)စစ်ဒေသမှုး (အသက်လုနေရဆဲ) မဏ္ဍပ်
စစ်ဆေးရေးခေါင်းစဉ်ဖြင့် VIP သားသမီးများ လုံခြုံရေးတာဝန်ယူထားရသူ။
၂ ။ ရဲမှုး မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် (ဒါဏ်ရာပြင်း) ( ။ )
၃ ။ဒုရဲအုပ်မောင်မောင်ဟန် ။ ( ။)
၄ ။ဒုရဲအုပ် ။ ( ။ )
၅ ။ဗိုလ်ကြီးသန့်စင်သိမ်း DSAအပါတ်စဉ် -၄၀- ( ပွဲချင်းပြီး )
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှုး၊ VIP သားသမီးများ မဏ္ဍပ်ရေမပြတ်လပ်ရေးတာဝန်ယူထားသူ ။
၆ ။ဦးကျော်ငြိမ်း - မယကဥက္ကဌ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် (ဒါဏ်ရာပြင်း)
၇ ။ဦးခင်မောင်လေး- ရယက ၊ ရာအိမ်မှုး ။ ( ပွဲချင်းပြီး ) မဏ္ဍပ်လုံခြုံရေးတာဝန် ။
၈ ။မောင်စိုးမိုးထွန်း - ကြံ့/ဖွံ့ ၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ရဲစခန်းဝင်း လိုင်း(၁) အခန်း(၁၀) နေ၊ ရဲတပ်ကြပ်မင်းထွန်း၏သား ၊(၁၉.၄.၁၀တွင်ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးတွင်သေ)၊မဏ္ဍပ်လုံခြုံရေးတာဝန် ။
၉ ။မောင်စိုးဝင်း - ကြံ့/ဖွံ့ ၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် ။ ( ပွဲချင်းပြီး ) မဏ္ဍပ်လုံခြုံရေးတာဝန် ။
၁၀။ကိုအောင်ကိုကိုမောင်-ကြံ့/ဖွံ့၊မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်။ (ပွဲချင်းပြီး ) မဏ္ဍပ်လုံခြုံရေးတာဝန် ။
၁၁။မသီတာပြုံး ၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၊ ( ပွဲချင်းပြီး )
၁၂။ ဒေါ်ဌေးဌေးရီ ၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၊ ( ပွဲချင်းပြီး )
၁၃။ ဒေါ်နီနီသိန်း- မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် ။ ( ပွဲချင်းပြီး )
၁၄။ ကိုကြင်အောင်-ဗဟန်းမြို့နယ် ။ ( ပွဲချင်းပြီး )
၁၅။မောင်ပိုင်ပိုင်ဦး - ၁၇.၄.၁၀ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးတွင်သေ
၁၆။ကိုကိုကြည် -အောင်လံသား ၊ ဒါဏ်ရာပြင်း၊ VIP သားသမီးများမိတ်ကပ်ပြင် ။ ( Gay Person )
ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး၌ ဆက်လက် ဆေးကုသမှု ခံယူနေရသူများမှာ ၊
ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာ ရရှိသူ ၂၀ ခန့်မှာ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ခံ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာနမှ(ရယက ၊ မယက)
အဖွဲ့ဝင်များ၊ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ၊ ကြံ့/ဖွံ့ များဖြစ်ပြီး ၊ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၀န်ကြီးဗိုလ်ချုပ်မောင်ဦး ကိုယ်တိုင်
ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး သို့သွားရောက်အားပေးစကားပြောခဲ့ကြောင်း ၂၂.၄.၁၀ထုတ်ကြေးမုံ သတင်းစာတွင် တရားဝင် ဖေါ်ပြထားသည်။
သို့ဖြစ်ရာ အပြစ်မဲ့ပြည်သူကြားတွင်ဗုံးခွဲသည်လား ၊
စစ်အာဏာရှင်စနစ်တွင်ပါဝင်ပါတ်သက်သူများကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတိုက်ခိုက်သည်လား အဖြေကား တ စစ ရှင်းပါချေပြီကော။
( Source: အီးမေလ်မှ ရရှိ )
(သတင်း - ဘားမားပါပါရာဇီ)။
Posted by 8888GSE at 7:08 PM
Politic thinker says ,"Politic has only two means which are you want to beatiger or you want to be victim.
A HERO OF STUDENTS' LEADER NEVER DIE
A HERO WOULD NOT LOSE HOPE
"I am disappointed by the unwillingness of the government of Burma to deliver on its promises for democratic dialogue and the release of political prisoners."
"I would like to make an appeal to President Bush: Please take pride asaPresident who has worked hard for Burma to achieve something before his term expires.”
-U Gambira,aleader of the All-Burma Monks’ Alliance that spearheaded nationwide protests in Burma in September---
Because we refuse to bow to these unjust election 'laws,' our party will be abolished by the regime soon. Still, the NLD will not disappear. We will be among the people, with the people. We will continue to fight for democracy, human rights and equality among all ethnic nationalities, by peaceful means. —
Win Tin,amember of NLD Central Executive Committee
They may wear different cloaks, but under the surface all dictators are similar. As the memory of dictators like Joseph Stalin fades, mistakes of the past repeat themselves withavengeance in forgotten places like Burma.One writer said of Stalin: “He had found Russia working with wooden ploughs and left it equipped with atomic [stock]piles.” But perhaps the true question doesn’t regard Stalin’s undisputable impact on humanity, but whether the legacy justified all the human sacrifice. To Stalin, the millions killed asaconsequence of his ambitious drive were simply stepping stones along the road to national prosperity. However, suchaMachiavellian frame of mind can neither be justifiable nor ethical.Stalin utilized numerous harsh methods in attempting to meet his ‘utopian’ goals. Collective farms were prevalent, while each Five Year Plan sought to leapfrog Russia ahead of competing nations and systems. Toward this end, virtually every industry fell under the direct control of the government and its de facto and shackled workforce. And the sad truth, more often than not, was results never met by an increasingly impoverished population.Stalin’s principle instrument for maintaining control over his country was his secret police. Through this institution, fear was instilled in the hearts of the people. The final death toll from Stalin’s regime is indeed staggering, with estimates ranging from 10 to 20 million people having perished.Stalin was under the belief that all his actions, extreme or otherwise, were necessary in order to pull Russia into the industrial age. Yet, ultimately, the major flaw in Stalin’s reasoning was that he claimed all sacrifices were necessary and for the future of Russia. “Life has improved, comrades. Life has become more joyous,” he once remarked. And while he was thinking about the future of the country and the generations to come, the standard of living within Russia had plummeted.Today, forgetting that dictatorship isaself inflicted wound, some intellectuals and humanitarians reason that simply sending more aid and increasing engagement are starting points to improving the political situation in Burma. But when they begin to regard the active opposition, as symbolized by Aung San Suu Kyi, as increasingly irrelevant, the time has come to refresh their memory about Joseph Stalin and the enormous price of dictatorship. It is one thing to want to bring Burma into the international community, but it is another to coddle and nurture tyrants without speaking out against their inhumane acts.So far, newly elected U.S. President Barack Obama and Foreign Secretary Hillary Clinton have takenacautious and slow approach toward Burma. But inaworld of competing interests and ideology, it will beagreat tragedy if they fail to takeafirm stand against the dictators in Burma.After all, the United States and its allies helped reform the militaries in Indonesia and Turkey within democratic transitions and transformations. Now, the U.S., United Nations, ASEAN and the European Union need decisive and effective leadership to help Burma. Obama and Clinton haveagreat chance to seize this mantle…if they are willing to seriously take on the leadership role.Today, even as Burma’s generals tragically act more and more like Stalin, could it not be that the army as an institution in Burma was originally inspired by similar beliefs to those of countries such as Indonesia and Turkey? This should offer an important clue as to where to begin with Burma.
THIS PRESENT VIDEO FOR ALL POLITICAL PRISONERS TO BE FREED
88GSE IS TRYING TO UPROOT REGIME AND OUR GROUP WElCOMS EVRYONE TO JOIN US IN UNITY
8-8-2008 Narrated by 8808 for Burma's Cristina Moon, and was shot by Silverstein.
Burmese & English Calendar
Do you see any Than Shwe Supporters in these pictures?
Some of us are in the Jail or in hiding in Burma, some of us got killed, some of us are out of Burma, some of us are in the jungle. But WE ARE ONE.
I MAKE MY LAW AND I BREAK IT MYSELF
THE MOST RESPECTED WRITER, EDITATOR PASSES AWAY IN...
Suicide bomber targets Burmese police
Myanmar’s decades-old conflicts will continue
Four wounded in grenade attack
ALTHOUGH MILITARY CHANGES CLOTH, IT DOES NOT WORK ...
88GSE LEADING MENBERS MEET US FOREIGN COMMITTEE
Daw Aung San Suu Kyi: Perils of military rule in T...
BURMA CIVIAL WAR VOLCANO HAS TO EXPLODE SOON
UNMASKING BURMA 'S TYRANT_refrm_ynf t_uGif;rJhtm%m...
IT IS TIME TO FIGHT FOR FREEDOM IN BURMA
ရေသဘင်ပွဲတော်မှာ ဗုံးသုံးလုံးကို ပြည်သူများ အကြားတ...
BOMB BLAST IN WATER FESTIVAL IN CAPITAL
Sound of the underground**************************...
JUNTA PREPARES TO BLOCK MONKS IN THE REGION
THE ANNOUNCEMENT OF ONSOB
သိန်းပေါင်းများစွာတန်ဖိုးရှိ မှောင်ခိုပစ္စည်းများ စ...
ANTI 2010 ELECTION CAMPAIGN ON THE FIRST DAY OF BU...
'Flag Will Keep Flying'
ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌကို ဥရောပသမဂ္ဂ နာမည်ပျက်စာရင်းသွင်း C...